भरतपुर महानगर : चुनावी ‘इपिसेन्टर’ - Meronews
चर्चाको शिखरमा भरतपुर महानगर :
भरतपुर महानगर : चुनावी ‘इपिसेन्टर’
मेरोन्यूज २०७९ वैशाख २४ गते १९:०९
चितवन । पवित्र नारायणी नदी किनारमा अवस्थित भरतपुर सहर । नेपालका छ वटा महानगरपालिकामध्येको एक महानगरपालिका । यो महानगरपालिका भौगोलिक हिसाबले चार सय ३२ दशमलव ९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या तीन लाख ६९ हजार ३७७ पुगेको छ । नेपालका छ महानगर मध्ये जनसंख्याको हिसाबले काठमाण्डौं, पोखरा पछि तेस्रो स्थानमा छ भरतपुर ।
कसरी बन्यो महानगर ?
वि.सं. २०७३ फागुन २२ गते नेपाल सरकारको निर्णय गरी फागुन २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि भरतपुरलाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गरिएको हो । भरतपुर लाई उपमहानगरपालिका बाट स्तर उन्नती गरि महानगर बनाउन यहाँका राजनीतिक पार्टी नेतृत्वको ठूलो योगदान छ । त्यसमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हाल चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ठुलो योगदान छ । दाहालकै कारण धेरै पूर्वाधार अपुग हुँदा पनि भरतपुर महानगरका स्तर उन्नती भएको थियो ।
नेपालमा ७५ जिल्ला रहेको बखत चितवनलाई ७६ औ जिल्लाको रुपमा चित्रण गरिँथ्यो । यहाँको बसोवास र रहनसहनले यतिवेला पनि ७८ औं जिल्लाको रुपमा हेरिन्छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका समग्र जिल्लाकै पहिचान जस्तै प्रकृतिको छ । यस महानगरपालिका क्षेत्रमा नेपालका प्रायः सबै जसो जिल्लाबाट बसाई सराई गरि आएका बासिन्दाहरुको मिश्रित बसोबास छ । त्यही मिश्रित बसोवास यहाँको विकासको आधार हो ।
पाँच वर्ष अगाडिसम्म भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रको बिकास समय गति अनुसार चल्दो थियो । जनघनत्व वढ्ने र नयाँ सहरमा परिणत हुँदा समेत बदलिंदो समयको गतिलाई पक्डिन सकेको थिएन । महानगर घोषणा हुँदै गर्दा महानगरमा हुनुपर्ने अधिकाँश प्रावधान पुरा भएका थिएनन् । माथि उल्लेख भइसके जस्तै मात्र चितवनका राजनीतिक दलहरुको पहल त्यसमा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको पहलकदमी र साथले भरतपुर महानगरपालिकामा परिणत भएको थियो । यहाँको अवस्थाले महानगरलाई गिज्याई रहेको भान हुन्थ्यो ।
उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिपकामा स्तरोन्नति भए पनि, आवश्यक पूर्वाधारको विकास थिएनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम कहाँबाट शुरु गर्ने अन्योल थियो । काँग्रेससँगको सहकार्यमा जितेर आएकी महानगर प्रमुख रेनु दाहाललाई प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को पार्टीबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिको साथ थिएन । केही समय काम गर्नसमेत निक्कै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयोे। तर, पछिल्लो समयमा समय परिस्थितिले कोल्टे फे¥यो ।
लगभग पाँच वर्षको यो अवधिमा भरतपुर देशकै नमूना सहरमा परिणत हुँदै छ । महानगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी रेनु दाहाल भन्छिन् “लगभग वितेको पाँच वर्षको पहिलो तीन महिना साउन देखि असोज सम्मको अवधि प्रतिद्वन्द्वी साथीहरुलाई सम्हाल्दैमा बित्यो । झण्डै दुई वर्ष कोरोनाको कारण भने जति काम गर्न सकिएन । तर पनि यहाँको विकास अन्य स्थानीय तहको भन्दा राम्रै भएको भन्ने ठानेकी छु । मैले मात्र भनेको होइन सबै त्यसै भन्छन । खै सबैको वाहीवाही खाइरहेकी छु ।”
२०७४ पूर्व भरतपुरमा जनसंख्या मात्रै बढेको थियो । पूर्वाधार विकासको कुनै छेकछन्द नै थिएन । सडक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक थियो । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा धुलाम्मे सडकमा भोट माग्न हिड्दै गरेको अनुभव सुनाउँदै दाहालले भनिन्, “त्यसबखत म जहाँ–जहाँ पुग्थे त्यहाँ पहिलो आवश्यकता सडक कालोपत्रे गर्नुप¥यो भन्ने हुन्थ्यो । त्यसैले सडक पूर्र्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं । यतिबेला केही ठूला परियोजनाबाहेक सडक संरचनामा हामीले राम्रै उन्नति गरेका छौं । बितेको पाँच वर्षमा ६२२ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । ४५० किलोमिटर सडकस्तरीय ग्राभेल गरिएको छ । आगामी एक वर्षभित्र मुख्य सहरको सडक सौन्दर्य हेर्नलायक हुनेछ ।” उनले आफुले गरेको विकासमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको ठूलो सहयोग रहेको बताउँछिन् ।
संघीय सरकारको सहयोग तथा महानगरपालिकाको पहलमा नेपालकै सबभन्दा लामो ८८.६ कि.मि. महानगरीय रिङ रोड आठ अर्ब २० करोडको लागत रहने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र ४०.५५ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण भइसक्ने अवस्थामा छ । भरतपुर–मेघौली सडक जम्मा ३० मिनेटमै पुग्ने गरी पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ ।
पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको छ किलोमिटर सडक झण्डै दुई अर्ब रुपियाँको लागतमा हरियाली (व्यूटिफिकेशन) सहितको ६ लेनको बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाइपास सडक चार लेन बनाउने काम एकाध महिनामा पूरा हुँदैछ । हुलाकी सडकको १९ कि.मि. विस्तार एवं स्तरोन्नति र भरतपुर–मेघौली–गोलाघाटको सहायक राजमार्ग खण्डको ८ कि.मि. सडकको काम पनि अन्तिम चरणमा छ ।
गौरवका आयोजनाको थालनी
पाँच वर्ष अगाडिसम्म राष्ट्रिय गौरवका ठूलो आयोजना भरतपुरवासीको कल्पनामा समेतमै थिएनन । नारायणी नदीको तटबन्धन नाम मात्रको थियो । बालुवामा पानी खन्याए जस्तो । हिउँदमा बनायो बर्खामा छैनको अवस्था थियो । अहिले झण्डै छ अर्बको रुपियाँको लागतमा नारायणी नदी नियन्त्रणको काम अगाडि बढिरहेको छ ।
निर्माणाधीन रिङरोडलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको छ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको हाल रोकिएको काम शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । दुई हजार सिट क्षमताको सिटी हल निर्माणको काम छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ । उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । मुख्य राजमार्ग र सहरमा ट्राफिक लाइटिङको काम हुँदैछ ।
हिजोका दिनहरुमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण नगन्य थियो । संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप थियो । तर बितेको चार पाँच वर्षको दौरानमा भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सात हजारभन्दा बढी विद्यार्थी निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालय छोडेर सामुदायिक विद्यालय जान थालेका छन् । शिक्षामा सुधार भएको छ । नमुना विद्यालयहरु स्थापना भएका छन् । शिक्षासँग सिकाइ जोडिएको छ ।
महानगरको पहलमा भरतपुरमा प्रहरी विद्यालय सञ्चालन शुरु भएको छ । ‘हाम्रो गौरव हाम्रो भरतपुर’ विषयसँग सम्बद्ध स्थानीय पाठयक्रम महानगरपालिकाले लागू गरेको छ । महानगरले आफ्नो बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च गर्न शुरु गरेको छ । महानगरको शिक्षाको स्तर बढेको छ । आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि २०७५ मा ५६.४७ प्रतिशतबाट वृद्धि भई २०७७ मा आइपुग्दा ६२ प्रतिशत पुगेको छ । भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रको कुल साक्षरता दर ९८.५ प्रतिशत रहेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले बितेको पाँच वर्षको अवधिमा थुप्रै किसानलक्षित कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेको दुधमा प्रति लिटर तीन रुपियाँ अनुदान दिन थालिएको छ । कृषिमा यान्त्रीकरणको लागि गरिएका कामले यहाँका किसानको कृषिप्रतिको आकर्षण वृद्धि भएको छ । बितेको पाँच वर्षको अवधिमा महानगर दुध, मासु र मत्स्यमा आत्मनिर्भर बनेको छ । यो अवधिमा तीन सय ५० वटा साना सिंचाइ र २१ वटा मझौला सिँचाइका सम्पन्न गरिएका छन् । ४५५ विघा क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुनिश्चितता महानगरकै पहलमा सम्पन्न भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका स्थापना हुँदाको बखत महानगरको आन्तरिक आम्दानी ४० करोड रुपियाँ मात्र थियो । जब कि महानगर बन्नको लागि आन्तरिक आम्दानी कम्तिमा पनि एक अर्ब हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, यतिबेला महानगरले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी एक अर्ब २५ करोड पुु¥याउन सफल भएको छ ।
वर्षौंसम्म जमिनको स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाएका सुकुम्वासीका लागि भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल दाता बनेर आएकी छन् । उनकै कार्यकालमा सुकुम्वासीलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको अवस्थाको अन्त्य भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका २ का ४७ घरधुरीबाट शुरु भएको लालपूर्जा वितरणले समग्र चितवनमा भूमिहीनमा आशा पलाएको छ ।
बितेको पाँच वर्षको अवधिमा माथि उल्लेख गरिएका बाहेक धेरै कामहरु भरतपुर महानगरपालिकामा सम्पन्न भएका छन् ।
जसको भरोसा हुँन्छ त्यही प्रति मानिसको आशा जागृत हुन्छ । वितेको पाँच वर्षको अवधिमा भरतपुर महानगरले गरेको कामले यहाँको नेतृत्वप्रति आम नगरवासीको आशा पलाएको छ ।
वितेको पाँच वर्षको उपलब्धि र त्यस बखत शुरु गरिएका अधुरा काम पूरा गर्न रेनु दाहालको विकल्प सोच्न नसकिने आम नगरवासीहरु बताउँछन् । भरतपुर–२ आँपटारी सुकुम्वासी बस्तीकी रचना लामिछाने भन्छिन्, “सुुकुम्वासी बस्तीको लागि रेनु दाहालको नेतृत्व अविस्मरणीय हुने देखिएको छ ।” उनका अनुसार यसअघिका नगर प्रमुखहरु हुन् या संसद जसले पनि हुन्छ हुन्छ भन्दै त्यहाँका बासिन्दालाई झुलाउँदै राखेका थिए । ‘रेनु दाहालको पहलले लालपूर्जा वितरणको शुरुआत भयो । सयौं माइलको यात्रा एक पाइलाबाट शुरु हुन्छ भने जस्तै हाम्रो लालपूर्जा पाउने बाटो खुल्यो भन्ने लाग्छ’ उनले भनिन् ।
भरतपुर महानगर क्षेत्रमा पछिल्लो समय जे जति विकास निर्माणका काम शुरु भएका छन् । ती कामको जस पनि महानगरकी निवर्तमान प्रमुख रेनु दाहालकै हो । महानगरलाई देशको नमूना बनाउने उनको योजनालाई साकार पार्न पनि उनी फेरि नेतृत्वमा आउनुुपर्ने धारणा राख्छन् भरतपुर ८ का वडाध्यक्ष दामोदर न्यौपाने । नेपाली काँग्रेसबाट वडाध्यक्ष पदमा जितेका न्यौपानेले विकासकी देवी भनेर सम्बोधन गरेका कारण उनलाई उनको पार्टीले स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।
त्यसो त नेकपा एमालेबाट महानगर प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिएका विजय सुवेदी भरतपुरको विकास त्यति देख्दैनन् । उनले एउटा सार्वजनिक समारोहमा समेत भनेका थिए । महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न गरिने खर्च इथानोल निकाल्ने काममा प्रयोग गरौं । त्यति मात्र कहाँ होर उनले एक चर्चित टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताको क्रममा पनि त्यही कुरा दोहो¥याएका थिए । बाटोघाटो विकास होइन । तर, रेनु दाहाल महानगरको प्रमुख हुँदै गर्दा सुवेदीले महानगरले शुरु गरेको गौरवको आयोजना क्रिकेट रंगशालाको लागि आयोजना गरिएको महायज्ञमा होस् या गणेशधाम बनाउने प्रयोजनमा भएको महायज्ञमा प्रमुख नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
भरतपुर महानगरपालिका यसपटक चुनावी इपिसेन्टर बन्न पुगेको छ । फेरि महानगरको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेनु दाहाल उम्मेदवार बनेकी छिन् । उनी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी , जनता समाजवादी र राष्टिय जनमोर्चाको साझा उम्मेदवारका रुपमा मैदानमा उत्रिएकी छिन् ।
अर्काेतिर एमालेका तर्फबाट एमाले र राप्रपा समेतको गठबन्धनबाट एमालेका विजय सुवेदी मैदानमा छन् । कांग्रेसको केन्द्रको निर्णय विरुद्ध काग्रेसको कारवाही भोगेरै पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेल पनि चुनावी मैदानमा छन् ।
मुख्यत रेनु र विजयका वीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जगन्नाथले कति भोट ल्याउँछन, त्यसले पनि मेयरको निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुने बताईएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको छोरी उम्मेदवार रहेको र उनले भरतपुरलाई प्रतिस्ठाको विषय बनाएको भरतपुरको चुनावी सभामा प्रचण्डले दिएको अभिब्यक्तिले पुष्टि गर्छ । अर्काेतिर एमालेले पनि भरतपुरमा रेनुलाई हराएर प्रचण्डलाई नै धक्का दिने योजनामा लागेको छ । एकले अर्काेलाई देखाई दिने भन्ने दुई कम्युनिष्ट पार्टीको झगडाले पनि भरतपुर महानगरपालिकाको चुनाव इपिसैनटर नै बन्न पुगेको छ ।